Xinhua Myanmar - COVID-19 ရောဂါစိုးရိမ်မှုကြောင့် တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုရန် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆုံးဖြတ်
မြောက်ကိုရီးယား တိုကျို ကိုဗစ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံချန်းမြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ် ၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့သော ပြုံချန်းဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အားကစားသမားများ ဝင်ရောက်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ပြုံယန်း ၊ ဧပြီ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ(DPRK) သည် COVID-19 ရောဂါစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့် လာမည့် ဇူလိုင်လတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် တိုကျိုနွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အားကစားဝက်ဆိုက် တစ်ခု၏ ယနေ့ ဧပြီ ၆ ရက် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို မတ် ၂၅ ရက်က ပြုံယန်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် DPRK အိုလံပစ်ကော်မတီ၏ အထွေထွေညီလာခံတွင် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝက်ဆိုက်က ဆိုသည်။
“ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အားကစားသမားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ၃၂ ကြိမ်မြောက် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုဖို့ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီ ” ဟု ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
KCNA သတင်းဌာနက မတ် ၂၆ ရက်၌ သတင်းဖော်ပြရာတွင် ယင်းနေ့မတိုင်မီတစ်ရက်အလိုက ပြုံယန်းမြို့၌ မြောက်ကိုရီးယားအိုလံပစ်ကော်မတီသည် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က အိုလံပစ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများအပေါ်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ သို့သော် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ပြုမပြုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကြေညာချက်မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ဆိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခင်နှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်း ကပ်ရောဂါစတင်ပြန့်နှံ့ချိန်ကတည်းက နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတည်ပြုလူနာ လုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်း ၊ သို့သော် နယ်စပ်ဂိတ်များ ပိတ်ထားခြင်းအပါအဝင် ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးကို တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။(Xinhua)
PRK decides not to attend Tokyo Olympics over COVID-19 concerns
PYONGYANG, April6(Xinhua) -- The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) will not participate in the Tokyo Summer Olympics this July due to concerns over the COVID-19 pandemic, according to Sports in the DPRK on Tuesday,awebsite on sports affairs in the country.
The delegation of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) enter the stadium during the opening ceremony for the 2018 PyeongChang Winter Paralympic Games at PyeongChang Olympic Stadium, PyeongChang, South Korea, on March 9, 2018. (Xinhua/Wang Jingqiang)
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် ဆာရိုဂျာ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၆၈ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ၇၀ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
Next Article ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှု မျိုးစုံနှင့်အတူ COVID-19 လူနာသစ် မြင့်တက်လာ